Mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan xawaaladaha Somaalida oo shaqadii joojisay – SBC
Mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan xawaaladaha Somaalida oo shaqadii joojisay
Posted by editor on February 19, 2012 Comments
Mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan dhanka xawaaladaha Soomaalida ayaa shaaca ka qaaday inay joojisay gabi ahaanba hawlihii dhanka xawaalada ee ay wadey, taasi oo lagu cadeeyey warsaxaafadeed ka soo baxay maamulka sare ee shirkadaasi.
Qoraal ka soo baxay maamulka sare ee shirkada Qaran Express uuna ku saxiixnaa Gudoomiyaha shirkada C/qaadir Xaashi Jimcaale oo nuqul ka mid ah ay heshay SBC ayaa lagu cadeeyey in laga bilaabo 16-ka bishan February ee sanadkan 2012 shirkada Qaran Express ay joojisay adeegyadii dhanka xawaalada ka dib markii waa sida qoraalka ku xusane ay shirkada uu soo foodsaartey culeys dhanka dhaqaalaha oo aanay u sii wadi karin adeegyadeedii.
Qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in hantiilayaasha shirkada lagu soo wargalin doono meelaha iyo dadka ay ku maqan tahay hantida shirkada.
Sidoo kale qoraalkaasi waxaa lagu sheegay in shirkadu bixin doonto amaanada iyo deymaha lagu leeyahay iyo in dib u qiimeyn lagu sameyn doono hantida shirkada lana iibin doono, iyadoo waliba si deg deg ah xisaab xir ah loogu diyaarin doono hantiilayaashii shirkada.
Lama oga ujeedooyinka dhabta ah ee ka dambeeya xirirtaanka shirkada Qaran Express oo ka mid aheyd shirkadaha dhanka xawaalaha ugu horeeya Soomaaliya, marka laga reebo qoraalkaasi ka soo baxay maamulka shirkada.
Ma ahan shirkadii ugu horeeysay ee dhanka xawaalada ee albaabada loo laabo waxaa horey loo xiray shirkadii Barakaat, Dalsan, Salaama iyo kuwa kale oo yar yar.
Qoraalka ka soo baxay maamulka shirkada Qaran Express oo lagu daabacay website-ka shirkada Halkan ka akhri